Inhloko zeNdaba Nkwenkwezi 03, 2019
********** Umpathintambo wezokwethulwa kwemibiko uNkosikazi Monica Mtsvangwa uthi uhulumende uyaqakathekisa umsebenzi owenziwa zintathelizindaba njalo uzimisele ukuguqula imithetho ukuze zisebenzi zikhululekile.
************* Ele Zimbabwe limanyana lamazwe womhlaba ekunanzeni ilanga lokuqakathekisa umsebenzi owenziwa zintathelizindaba ele World Press Freedom Day.
*********** Intathelizindaba bezithe gwaqa edolobheni le Harare zinanza ilanga le World Press Freedom Day kulenkuthazo yokuthi uhulumende ahloniphe amalungelo azo.
*********** Imidlalo yenguqu eyesigaba se Castle Lager Premier Soccer League ingena kuviki lesithupha kulimpelaviki iqembu le Highlanders lidinga ukunqoba okwakuqala selokhu kuqale imidlalo yalonyaka.
********** KuLiveTalk namhlanje sikhangela ukunanzwa kwelanga lokuqakathekisa umsebenzi owenziwa zintathelizindaba emhlabeni jikelele ele World Press Freedom Day. Thumelani imilayezelo yenu ku WhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318 kumbe enkundleni yokuxhumana eyeFacebook ekhasini lethu ele VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezindaba lezinye kuStudio 7 ngo half past 7 ntambama langohalf past 6 ekuseni, kumagagasi athi 909 am, 4930, 15580 laku 6080 kilohertz kuShortwave.